Vaky trano : Lasan'ny jiolay ny finday miisa 05, kara-panondro ary ny volan'ilay mpanakanto
Mpanakanto avy nanao fampisehoana tao Namorona no nisy nandroba ny alin'ny Talata hifoha ny Alarobia 3 novambra 2021.
Noloahan'ireo jiolahy ny rindrin'ny bungalow nitoeran'ireto mpanakanto tao Ambalavotaky Manakara taorian'ny fampisehoana.
Rendriky ny torimaso tsy nahare izay ambonin'ny tany izy ireo ka dia nanararaotra ny jiolahy. Lasa avokoa ny finday miisa 05, kara-panondro sy ny volan'ilay mpanakanto.
Ankanjo teny an-koditra sisa tavela. Tsy nikitika ireo mpanakanto izy ireo.
Laniera sy Betsimitatatra : Karakaina ny tanimbary
Ritra ny rano eny amin’ny lemak’i Laniera sy Betsimitatatra, Antananarivo sy ny manodidina. Vakivaky ny tanimbary efa vita ketsa.
Manahy ny mpamboly sao ho faty ireo efa voaketsa ka miandrandra fandatsahana orana artifisialy, sy vahaolana maharitra, tsy hiandrasana vahaolana amin’ny COP26 ny Glasgow Ecosse.
mercredi, 03 novembre 2021 11:02
Angovo azo avaozina : Iza no madio sy tsara ?
(Somary lavalava ny fandalinana)
Raha nanjaka tokana ny famokarana angovo azo avy amin'ny solitany na pétrole teo, dia manomboka mijery angovo hafa izao tontolo izao.
Mihena hatrany manko ny tahirin-tsolika sady miaka-bidy, ankoatran'ny loto sy aretina aterany. Eo amin'ny 30 taona eo sisa no vinavinan'ireo mpahay toe-karena dia ritra ny tahirin-tsolika maneran-tany ao ambanin'ny tany ao.
Miatrika ny fahavoazana manolona ny fiovan'ny toe-trandro sy ny faharatsian'ny tontolo iainana ihany koa ny firenena maro, satria tsy mitsahatra mitombo ny hafanan'ny tany, izay niakatra 1.5°C tato anatin'ny taona vitsy izay.
Izany dia mitarika ny fitsoniky ny ranomandry eny amin'ny ilabola avaratra sy ny faran'ny ilabola atsimo, ka miteraka fiakaran'ny haavon'ny ranomasina, miteraka rivodoza matetika, sy fikorotanan'ireo riaka sy renirano, ka dia mitarika ny tondra-drano tampoka, nefa koa miharitra ihany koa ny renirano, fa tapitra mivarina an-dranomasina ka mitombo ny haintany sy ny kere aterak'izany.
mercredi, 03 novembre 2021 10:33
Faritra Androy : Fankalazana ny faha 60 Taona ny Polisim-pirenena
Tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny faha 60 taona ny Polisim-pirenena ny Fitaleavam-paritry ny Filaminam-bahoaka aty amin'ny Faritra Androy.
Izany dia nomarihina tamin'ny alalan'ny Fanatanjahantena, Hetsika ara-koltoraly maro, fanomezana Rà ireo mpiara-belona.
Tonga nanome voninahitra izany lanonam-pankalazana izany ny Solombavam-bahoaka Jean Michel Henri, voafidy teto Ambovombe Androy sady Kestiora Voalohany ao amin'ny Antenimieram-pirenena, sy ireo manam-pahefana isan-tsokajiny eto Androy.
Nanolotra ranom-boankazo ho an'ireo Polisy eto Androy amin'izao fankalazana izao sy vola 1 tapitrisa Ariary ny depioté Jean Michel Henri.
Nankahery hatrany ireo Polisy eto Androy i Atoa Kestiora Voalohany, amin'ny hahatontosana antsakany sy andavany ny adidy izay ankinin'ny Vahoaka amin'izy ireo.
mercredi, 03 novembre 2021 09:31
Ministeran'ny Fitsarana : Dinikasa niaraka tamin'ny IFC
Notontosaina ny talata 2 novambra 2021 ny dinikasa niarahan'ny ministeran'ny Fitsarana, notarihan'ny minisitra Imbiki Herilaza, tamin'i ramatoa Marcelle Ayo, tompon'andraikitra misahana an'i Madagasikara, Maurice, Comores ary Seychelles na ny Country Manager de l'IFC (International finance Corporation), izay vondrona eo anivon'ny Banky iraisam-pirenena.
Nodinihina tamin'izany, ny fiaraha-miasa amin'ny fanavaozana ny asam-pitsarana, ny Lalàna mifehy ny fandraharahana, ny fanamorana ny fahazoana famatsiam-bola ho an'ireo mpandraharana, ny toeran'ny Fitsarana amin'izay mety ho fifandirana ara-ekonomika sy ara-pandraharahana.
Ity rafitry ny banky iraisam-pirenena ity moa dia mamatsy vola ny sehatra tsy miankina, sy ny sehatr'asam-panjakana izay mifandraika mivantana amin'ny fanampiana ny asa fihariana.
mercredi, 03 novembre 2021 09:11
Fitoniana sy fandriam-pahalemana : Fananganana "Vigie de Police" ao Ambositra
Mamaraparana ny Fananganana ireo "Vigie de Police" miisa EFATRA (04) ireto ny eo anivon'ny Faritra Amoron'i Mania, izay tarihan'i Governora ramatoa Mamiarisoa Radaloson, amin'izao fotoana izao.
Izany no natao hisian'ny fitoniana sy fandriam-pahalemana eo anivon'ny Faritra, fa indrindra koa mba ho fiarovana ny Ain'ny Vahoaka sy ny Fanànany.
Efatra no nanombohana ny asa fananganana eto antampo-tanàn'Ambositra : Fokontany Morafeno, Fokontany Vatovory, Fokontany Antanamahalana ary Fokontany Ambalamahasoa, izay isan'ireo Fokontany sokajiana ho mafanafana izy ireo.
Nanambara moa ramatoa Governora fa atolotrin'ny Faritra amoron'i Mania ampitiavana hoan'ny Polisimpirenena ireto fotodrafitrasa natao ireto.
mercredi, 03 novembre 2021 08:50
Fiarovana ny tontolo iainana : Miandrandra famatsiam-bola ny fampiasana ny bioéthanol i Madagasikara
Niady ny hirosoana amin'ny fampiasana ireo angovo madio manerana an’i Afrika, amin’ny alalan’ny famatsiam-bola ireo fampiasana ny bioéthanol na biogaz ho solon’ny arina fandrehitra i Madagasikara nandritra ny COP26, na fihaonambe manerantany momba ny fiovaovan’ny toetr’andro, tanterahina any Glasgow any Ecosse ankehitriny mba hiarovana ny ala.
Fantatra fa mandripaka ala 1ha isan-taona ny tokantrano iray aty Afrika, ho an’ny filana ao an-tokantranony.
Ny fitrandrahana ny ala hamadihana ireo hazo ho arina fandrehitra anefa no fositra voalohany amin’ny fandripahana ny ala.
Nanao antso avo tamin’ ireo mpitondra fanjakana rehetra mandray anjara amin’ny COP26 ny filoha Andry Rajoelina ny hanetsehana ilay famatsiam-bola mitentina 100 lavitrisa dolara, izay nifanarahana tamin’ny “Accord de Paris”, mba hahafahan’i Afrika mametraka ny politika hirosoana amin’ny fampiasana angovo madio.
Nambarany fa afaka ny ho fitaratra amin’ny fampandrosoana maitso, ny fampandrosoana miaro ireo harena voajanahary i Madagasikara.
mercredi, 03 novembre 2021 08:41
ENIAP Antsirabe : Nampitondraina ny anarana "Contrôleur Général de Police N'Diaye Amadou"
Nampitondraina ny anarana "Contrôleur Général de Police N'Diaye Amadou" ny ENIAP (Ecole Nationale des Inspecteurs et Agents de Police) Antsirabe.
Ny Contrôleur Général de Police N'DIAYE Amadou no tale voalohany nitondra ny ENIAP na Sekolin'ny Inspecteurs sy Agents de Police ny taona 1973.
Raha tsiahivina ny momba azy dia teraka tamin'ny taona 1927 ny lehilahy, ary ny taona 1959 izy no niditra ho "Inspecteur de Police".
Ny taona 1960 kosa izy no nanaraka ny fiofanany ho Commissaire de Police tany Montpellier Frantsa.
Nitana andraikitra maro teo anivon'ny Polisim-pirenena izy taorian' izay. Anisan'izany ny fitantanana ny fibaikoana teo anivon'ny Hery vonjy taitra Antsiranana sy ny fibaikona ny FRS teto Antananarivo, ary efa Tale teo anivon'ny Polisim-pirenena ihany koa ny tenany.
mercredi, 03 novembre 2021 08:37
UNFPA : Manohana ny ady amin’ny Herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy
Nanolotra fitaovana informatika ho fanampiana amin’ny ady atao amin’ny Herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (Violences basées sur le genre – VBG) ny « Fonds des Nations Unies pour la Population » (UNFPA), ny Talata 02 Novambra 2021.
Izany dia notanterahina teny amin’ny Foiben’ny Firenena Mikambana eny Andraharo, ho an’ireo Ministera miisa efatra miara-misalahy amin’ny ady amin’ny VBG, dia ny Ministeran’ny Fitsarana, ny Ministeran’ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampiroboroboana ny Vehivavy, ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka ary ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka.
Rafitra ara-pahasalamana : Paramedy no mitantana ny 73% ny CSB manerana an’i Madagasikara
Manatanteraka kongresy nasionaly aty Morondava ny Paramedy eto Madagasikara nanomboka ny talata 2 novambra 2021 ary haharitra hefarana (4 andro) izany.
Mandritra izany ny fanaovana tatitra ary ny fandrafetana ny vina ho an’ny taona ho avy, ary koa ny fifampizarana traikefa.
Fantatra nandritra izany fa Paramedy avokoa ny 45% ny mpiasan’ny fahasalamana. Mitantana ny 73% ny CSB manerana an’i Madagasikara izy ireo.
Ahitana mpandray anjara hatramin’ny 350 izao fihaonana aty an-drenivohitry ny Faritra Menabe izao.